Colts.com မှ Browser Market Share တွင်ဆက်လက်လေ့လာပါ Martech Zone
တနင်္လာနေ့, သြဂုတ်လ 27, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ငါ post ကိုရေးသားခဲ့သည်အခါ Browser စျေးကွက်ဝေစု, post ကိုအပေါ်တုံ့ပြန်ချက်တွေအများကြီးငါ W3Schools.com အပေါ်ကစာရင်းဇယားကိုမယုံကြည်သင့်ကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီတုန့်ပြန်ချက်ကိုကျွန်တော်တကယ်မေးခွန်းထုတ်ခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာစာရင်းအင်းဟာ ၀ ဘ်ဆိုဒ်နဲ့တစ်ခြားကွဲပြားတာလဲ။
ကောင်းပြီ၊ ပံ့ပိုးသူတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါတကယ်အရေးပါတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။ သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Pat Coyle ကိုအီးမေးလ်တစ်စောင်ကျပြီးသူကအချက်အလက်အချို့ကိုမျှဝေချင်သလားလို့မေးခဲ့တယ် Colts.com မှ။ ကျွန်ုပ်၏အတွေးသည် avid အားကစားပရိသတ်များဖြစ်သည်ဆိုပါက Web Technologies အကြောင်း ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့လာရောက်သူတစ် ဦး နှင့်အတော်ပင်ကွာခြားနိုင်သည်။ ထိုအရာရှိ၏! အောက်ပါစာရင်းဇယားများသည် Colts.com သို့ visitors ည့်သည်အ ၀ င် ၈၇၀,၀၀၀ ကိုအခြေခံသည်။
Colts.com Vis ည့်သည် Browser စျေးကွက်ဝေစု:
Colts.com Vis ည့်သည် Browser စျေးကွက်ဝေစု - ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် -
ဘယ်သူသိလဲ?! ငါစျေးကွက်ဝေစုအပေါ်ယူဆချက်ကိုလုပ်မယ့်အစားသူတို့ကိုကြည့်ရှုသောအခါယခုမှစ။ လွတ်လပ်သောဘရောက်ဇာခွဲဝေမှုကိန်းဂဏန်းများကိုအများကြီးပိုပြီးအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ဘေးဘက်မှတ်စုတွင်၊ ကျွန်ုပ်၏ပြီးခဲ့သည့်လအတွက်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်အတွက်အချက်များဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုငါအရင်ကတစ်ခါမှမကြည့်ဖူးဘူး၊
ကျွန်ုပ်၏ Vis ည့်သည်များအတွက် Browser Stats
တိုက်ရိုက်စျေးကွက်အပြောင်းအလဲရှိသည် - 40/40/20 Rule Anymore မဟုတ်ပါ
သြဂုတ် 28, 2007 မှာ 8: 29 AM
ဒါကိုလည်း ကျွန်တော်ကြားဖူးပြီး အဓိပ္ပာယ်နည်းနည်းရှိပေမယ့်၊ ဆိုက်တိုင်းဟာ ထူးခြားတဲ့ပရိသတ်တွေကြောင့် မတူညီတဲ့ဘရောက်ဆာတစ်ခု ဖြန့်ကျက်ထုတ်လုပ်ပေးမယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ လူကြိုက်အများဆုံး ဝဘ်ဆိုက်များထံ ကိန်းဂဏာန်းများအားလုံးကို ပေါင်းစည်းလိုက်လျှင် ၎င်းတို့ရရှိသည့်အရာများကို သင်ရရှိမည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်မြင်လိုပါသည်။ (ကျွန်ုပ်သည် ၎င်းတို့၏ ဒေတာရင်းမြစ်ကို ကိုယ်တိုင် မစစ်ဆေးရသေးပါ)။
ဘလော့ဂါတော်တော်များများကို Firefox မှာ နားဆင်ထားတယ်ဆိုတာ သိပေမယ့် Colts တွေက ယေဘုယျ အစုလိုက်အပြုံလိုက်တွေကို ရရှိပါတယ်။
အရမ်းကောင်းတဲ့ ဒေတာအစုံပါ၊ မျှဝေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဂရပ်ဖစ်လည်း ကောင်းတယ်။
LA Headshot ဓာတ်ပုံ
သြဂုတ် 29, 2007 မှာ 12: 58 AM
ဘလော့ဂ်တွေဖတ်တဲ့လူတွေက Firefox ကို ပိုသုံးလေ့ရှိတယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ ကျွန်တော် Internet Explorer ကို ဒီလောက်အများကြီး မသုံးဖူးပါဘူး။ အများသူငှာ ပိုသုံးကြမှာ သေချာပါတယ်။
သြဂုတ် 29, 2007 မှာ 6: 00 AM
အဲဒါက စိတ်ဝင်စားစရာပဲ… ဒါပေမယ့် အချက်အလက်တွေက မင်းမှန်တယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထားတွေပေးတယ်။
သြဂုတ် 30, 2007 မှာ 2: 36 AM
W3Schools တွင် မတူညီသော ကိန်းဂဏန်းများနှင့်အတူ ဤအရာကို သင်ပြန်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ခြင်းအတွက် ဝမ်းမြောက်မိပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် ထိုပို့စ်တွင် ရက်စက်သောမှတ်ချက်တစ်ခု ရေးပါတော့မည်။
ဤနေရာတွင် အမှန်တကယ် ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့သည့်အချက်မှာ အရေးကြီးသော ကိန်းဂဏာန်းများသာဖြစ်ပြီး ထိုအချိန်တွင် သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသည့် ဆိုက်အတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် သင့်ဆိုက်နှင့် Colts ဆိုက်သည် IE တွင် အလုပ်မလုပ်ပါက၊ Colts သည် သင့်ထက် များစွာပို၍ ပြဿနာများရှိလိမ့်မည်။ ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုစီတိုင်းသည် ၎င်း၏ပရိသတ်များနှင့် ၎င်းတို့အသုံးပြုသည့် ဘရောက်ဆာများနှင့် လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်တွင် ဘရောက်ဆာမျှဝေမှု၏ အလုံးစုံအတိုင်းအတာတစ်ခုအနေဖြင့်၊ Mozilla မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုကြည့်ရန်၊ ကျွန်ုပ်သည် Google ၏ဘရောက်ဆာကိန်းဂဏန်းများကို ကြည့်လိုပါသည်။
PC Hardware ကောင်လေး
သြဂုတ်လ 30 ရက် 2007 ခုနှစ် 8:37 နာရီ
ကွန်ပြူတာ ဝါသနာရှင်များသည် ပျမ်းမျှ shmoe ထက် Firefox ကို ပိုမိုအသုံးပြုကြသည်မှာ သေချာပါသည်။ နှစ်မျိုးလုံးသုံးတယ်။ ကျွန်တော် အခု IE ကို ကျင့်သားရနေပြီ ဖြစ်လို့ Firefox ကိုပဲ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြောင်းသုံးနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် IE သုံးနေရင်း တစ်လမှာ နှစ်ကြိမ် Malware တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ပိုင်း မကြာသေးပါဘူး။
စက်တင်ဘာ 10, 2007 မှာ 9: 58 AM
ဤပို့စ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ယနေ့မြင်တွေ့ဖူးသမျှ နည်းပညာလေးလံသောဆိုဒ်များမှ ကိန်းဂဏာန်းများသာဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် သုံးစွဲသူများသည် မြင့်မားသော resolution နှင့် IE မှတပါး အခြားဘရောက်ဆာတစ်ခုရှိရန် အလားအလာပိုများပါသည်။ colts.com ရှိ avg မျက်နှာပြင် ကြည်လင်ပြတ်သားမှု သည် မည်ကဲ့သို့ မြင်ချင်ပါတယ်... 800x အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းမှ ရုန်းထွက်ပြီး 1024x ကို ကျွန်ုပ်၏ အခြေခံ လိုင်းအဖြစ် အသုံးပြုပါ ။